Android အတွက် RAM ကိုအာနိသင်တိုးမြှင့် APP ကို ​​| APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » မက်စ် RAM ကို booster ကတော့ Fast စူပါသန့်စင်, ထပ်တိုးဘက်ထရီ
မက်စ် RAM ကို booster ကတော့ Fast စူပါသန့်စင်, ထပ်တိုးဘက်ထရီ APK ကို
အစာရှောင်ခြင်းအာနိသင်တိုးမြှင်အခမဲ့သန့်စင်နှင့်အတူနေရာပိုကျပိုသိုလှောင်မှု။ နောက်ခံများလွန်း apps များ running သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုနှေးကွေးစေခြင်းနှင့်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ ဖုန်းကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်စူပါအစာရှောင်ခြင်း, စင်ကြယ်သောအစာရှောင်ခြင်းထပ်တိုးဘက်ထရီနဲ့ဖုန်းကိုမြန်ဆန်အောင်ဖုန်းအဘို့အစာရှောင်ခြင်း Optimizer ။
ပိုမြန်သင့်ရဲ့ RAM ကိုမြန်နှုန်းပြေးဖုန်းကို Boost ⚫
⚫ဖုန်းကိုခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည် Enhance ။ ဘက်ထရီနှင့်ဖုန်း optimization
, ကြာကြာအသုံးခံတဲ့ဘက်ထရီနဲ့ဘက်ထရီ optimization သင့်ရဲ့ဖုန်းဘက်ထရီ Boost ⚫
⚫သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ, ပိုမြန်မလိုအပ်တဲ့ app တွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဖုန်းကိုသတ်ပစ်
⚫မြှင့်တင်ရန်နှင့်အရှိန်မြှင့်သင့်ရဲ့သိုးထီး & ဘက်ထရီ performanceKeep သင့်ဖုန်း, စင်ကြယ်သောအစာရှောင်ခြင်း, ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုရှည်အချိန်များအတွက်တရားစွဲဆိုနေဖို့တစ်ခုမှာ tab ကို။
သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုအပူစိတ်ပူဖြစ်ကြသည်နှေးကွေး, ပြဿနာဆွဲထား? ဤတွင်အဖြေပါ! အေးမြစင်ကြယ်သောတိုးတက်မှု, သင်၏ဖုန်းကို။ ယင်းဟာ android ဖုန်းတစ်ဦးကမာစတာ RAM ကိုသန့်စင် app ကို။
စင်ကြယ်သောအစဉ်အမြဲထက်အေးမြ max ကို, ပိုမြန်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလုပ်ပါ။ အသေးစားနှင့်ပေးနိုင်သောမိုဘိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့် app တစ်ခု။ system ကိုသန့်စင်, Booster, Ram သန့်စင်, ဖုန်း Cooler, max ကိုဘက်ထရီ Optimize ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူပါဝါကိုမက်စ်ဖုန်း Cleaner 2018 ။ မြှင့်တင်ရန်နှင့်ချအအေးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ minimize CPU အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကယ်တင်နှင့်ချဲ့ထွင်ဖို့အကောင်းဆုံး android သန့်စင်။ ဖုန်း CPU ကိုအပူချိန် Minimize နှင့်အချည်းနှီး cache ကိုဖိုင်တွေရှင်းလင်းနှင့်ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်။ အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းအရှိန်မြှင့်။
RAM ကိုများအတွက်ပြင်းထန်သော RAM ကို Cleaner နဲ့ RAM ကိုအာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းမှတ်ဉာဏ် Optimizer သည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်မလိုအပ်သောနောက်ခံ apps များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသတ်။ ဖုန်းနှင့် RAM ကိုမြန်နှုန်းပိုကောင်းအောင်အစာရှောင်ခြင်း RAM ကိုမာစတာကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ မက်စထရီတဲ့ Expert: စောင့်ကြည့်ပြီး save ဘက်ထရီ & ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပါ။
သိပ်အများကြီး apps များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်ခံအပြေးကြသောအခါသင့်ရဲ့ device laggy နှင့်နှေးကွေးဖြစ်လာသည်။ kill မပါဘဲနှင့်ကပိုမြန်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအောင်ရန်ခက်ခဲရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တန့်။ ဒါကြောင့်ပိုမြန်ချောမွေ့, booster ကတော့စူပါသန့်စင်ကို၎င်း, အကောင်းဆုံးဖုန်းကိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် Optimizer သင့်ရဲ့ဖုန်းပါစေ။ device ကိုကျန်ရစ်ပြဿနာ, ဖုန်းမှနိမ့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို fix, ဖြစ်စဉ်ကိုသတ်ဖြတ်နှင့်ဖုန်းဟာ android အေးချအအေးအားဖြင့် CPU အသုံးပြုမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကိုချ Cool နှင့် RAM ကို Booster နှင့်အတူအပူလွန်ကဲ apps များရပ်တန့်ခြင်းဖြင့် CPU အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချ!
သိုးထီး booster ကတော့ဘက်ထရီ Booster လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူပါဝါကိုစီမံခန့်ခွဲမှု။ track နဲ့သင့်ဖုန်းကိုဘက်ထရီကျန်းမာရေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပေါငျးတို့သဘက်ထရီကြာကြာအသုံးခံတဲ့ဘက်ထရီများအတွက် apps များနှင့်အရင်းအမြစ်များစားသုံးပိတ်ပါ။ ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုချဲ့ထွင်ပြီးကြာကြာအချိန်များအတွက်တရားစွဲဆိုနေဖို့။ ရီးရဲလ်အချိန်ဘက်ထရီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း, optimized အဆင့်တွင်ဖုန်းကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအာဏာကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီ optimized အဆင့်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ သိုးထီး Booster, သင်ပိုမိုပါဝါကိုချွေကူညီရန် Modes သာချွေတာဘက်ထရီ။ ဤရွေ့ကား Modes သာသင့် system performance ကိုစောင့်ကြည့်အပေါင်းတို့နှင့်ဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေများမှာဘက်ထရီသိမ်းဆည်းပါ။
မြန် RAM ကို Booster & Cleaner ကမူ Max ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် Enhancer ၏အင်္ဂါရပ်များ
Android အတွက် RAM ကို Booster
သိုးထီးအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖွင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ပိုမြန်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအောင်နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်။ အနီးကပ်နှင့်တက်နေရာလွတ်ဘို့နောက်ခံ running Apps နဲ့ process ကိုသတ်ပစ်နှင့်ပိုမြန်ဖုန်းကို run ။ နေရာပိုအလိုတော်ပိုကောင်းဖုန်းကိုစွမ်းဆောင်ရည်စေပါတယ်။ app များကိုစားသုံးအနီးကပ်မိုးသည်းထန်စွာအရင်းအမြစ်များကိုအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချ Cool နှင့် CPU နဲ့ RAM ကိုထံမှဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဆင်းကိုလျှော့ချနှင့်ဖုန်းဟာ android အေးဆင်းအအေး။
ဘက်ထရီပါဝါ Booster- ဘက်ထရီသက်တမ်းထပ်တိုးပါ
ရီးရဲလ်အချိန်ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီပိုစတာနှင့်အတူထိန်းချုပ်ပြီးကြာကြာအချိန်များအတွက်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပါ။ ဘက်ထရီ Cooler CPU အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဘက်ထရီအပူချိန်ကိုချအအေးနှင့်အတူ။ တစ်ဦး optimized အဆင့်တွင်ဖုန်းကိုအရောင်အဝါ Adjust နှင့်ကြာကြာများအတွက်တရားစွဲဆိုနေဖို့။
စူပါ Cleaner- Ram Booster
သန့်ရှင်းမလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် running app များကိုသတ်ပစ်နှင့်ပိုမြန်ဖုန်းကိုအောင်နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုနေရာလွတ်။ အကောင်းဆုံးမြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် RAM ကိုသန့်စင်ခြင်းဖြင့်ခြုံငုံဖုန်းကို performance ကိုမြှင့်တင်ရန်။
ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်မက်သိုးထီးအာနိသင်တိုးမြှင့် Download နဲ့သင့်ဖုန်းကို optimized ကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေ, ချောမွေ့ကယ်တင်နှင့်သန့်ရှင်းသော။
မက်စ် RAM ကို booster ကတော့ Fast စူပါသန့်စင်, ထပ်တိုးဘက်ထရီ
5.12 ကို MB